न्यायाधीशको मान राख्न नसक्ने न्यायपरिषद्, केके हुँदै छ चलखेल ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ श्रावण ६, मंगलवार १७:१०:००
सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेका दुई न्यायाधीश, उच्चका तीन मुख्य न्यायाधीश र आधा दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशको नियुक्तिको तयारी हुँदै । यसका निम्ति न्यायपरिषद अध्यक्षका रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गोप्य रुपमा तयारी अघि बढाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै असारमै धेरै न्यायाधीशको सरुवासँगै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको थियो । तर केही न्यायाधीश अवकाशको मुखैमा रहेको र भागबण्डा मिलाउन अझ फराकिलो ठाउँ बन्ने भएकाले बैठक परपर धकेलिँदै गएको बुझिन्छ ।
न्यायपरिषद बैठक नै नबसेका कारण पोखरा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश यज्ञ बस्यालले अवकाश पाएको एक महिना पनि नबित्दै अर्का मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद पोखरेल घर जाने अवस्था बनेको छ ।
साउन ५ गते न्यायपरिषद्को बैठक बसेर उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर उनीमाथि ठूलो अन्याय गरिएको छ । पोखरेललाई घर पठाएर न्याय क्षेत्रमा राम्रा कोटीका न्यायाधीशको नेपालमा भविष्य सकिँदै जान थालेको टिप्पणीले व्यापकता पाएको छ । यसैगरी विगतमा प्रचण्डराज अनिलदेखि केशरीराज पण्डितसम्मले सर्वोच्च अदालत प्रवेशको मुखैमा तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वको बदनियतपूर्ण भावनाको कोपभाजनमा पर्नुपरेको थियो ।
उच्च अदालतमा छानीछानी अवसर दिने र करिअरमा अगाडि बढाउने प्रथाले अहिले पनि नराम्रोसँग गाँजिसकेको छ । मुख्य न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नियुक्ति त एउटा सानो झिल्को मात्रै हो ।
अन्य वरिष्ठहरुलाई मिचेर भएको उनीहरुको नियुक्ति र अहिले वरिष्ठहरुलाई फालेर गरिन लागेका अन्य नियुक्तिले न्यायालय थप विर्शंखलित हुँदै गएको छ ।
वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरु प्रकाशचन्द्र गजुरेल, तेजबहादुर कार्की, बिष्णु देव पाैडेल, डिल्लीराज आचार्य, शिवनारायण यादव,पवन कुमार शर्मा, बाबुराम रेग्मी,शेषराज सिवाकोटी, मोहनबहादुर कार्की, विनोद शर्माहरुले दशौं वर्षदेखि एउटै पदमा रहेर काम गर्दा पनि अयोग्य हुने तर कुनै व्यक्तिलाई सिधै तलबाट टिपेर मुख्य न्यायाधीश बनाउने प्रथाले अदालतमा नयाँ प्रकारको भाँडभैलो सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नै विगतलाई बिर्सेर न्यायपालिकामा वरीयताक्रम मिचेर किन र कसको सल्लाह वा डिजाइनमा काखा र पाखा गर्न थालेका हुन् ? स्वविवेकले हो या कसैको गलत सुझाव र दबाबले, प्रधानन्यायाधीशका यी शृंखलाबद्ध निर्णयले न्यायपालिकाभित्रको वातावरण भने खल्बलिँदै छ ।
राणाले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको वरीयता मिचेर किशोर सिलवाललाई पोखरा उच्च अदालमा कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाएका छन् । वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका १३ जनालाई उछिनेर सिलवाललाई मुख्य न्यायाधीशको लाइनमा राखेपछि अरु न्यायाधीशलाई जागिर नै निल्नु न ओकल्नु भइसकेको छ । सिलवाललाई पाटनमा छँदा नै राजस्व न्यायाधिकरणको समेत जिम्मेवारी दिँदा उनीप्रति शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद रहेको पुष्टि भएको थियो । अहिले अरु १३ जनान्यायाधीशलाई पाखा लगाएर उनलाई कामु मुख्य न्यायाधीश बनाइएपछि उनको पछाडि ठूलै शक्तिको आशिर्वाद रहेको झन् छर्लंग भएको छ । अहिले फेरि प्रकाशचन्द्र गजुरेल, तेजबहादुर कार्की, शिवनारायण यादव, शेषराज सिवाकोटी, मोहनबहादुर कार्की, विनोद शर्मा, डिल्लीराज आचार्यजस्ता अब्बल न्यायाधीश हुँदाहुँदै नीता गौतम दीक्षित, शिवराज अधिकारी लगायतलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने चर्चा छ ।
अदालतमा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन गरिरहेका न्यायाधीशहरुमाथि एकपछि अर्को अन्याय गरिनुको कारण के हो ? अहिले यो प्रश्न न्यायाधीशवृत्तमा व्यापक रुपमा उठेको छ । न्यायाधीश पंक्तिमा असन्तुष्टि र निराशा फैलाएर राणाले कसरी न्यायपालिका चलाउन खोजेका हुन् रु उनले आफ्नै विवेकले यो निर्णय गरिरहेका छन् वा अरु नै शक्ति र स्वार्थ समूहको प्रभावमा यो काम भइरहेको छ भनेर कतिपय न्यायाधीशले सामूहिक छलफल नै चलाइरहेका छन् ।
यसअघि यसैगरी दर्जन जति वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उछिनेर तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई उच्च अदालत, विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशबनाइएको थियो । न्यायक्षेत्रमा त्यतिखेर नै बढेको असन्तुष्टिको राँको सेलाउन नपाउँदै न्यायपरिषद फेरि उही पथमा अघि बढ्ने देखिएको छ । न्यायपपरिषद्को बैठकै नबोलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएका पछिल्ला प्रशासनिक निर्णयले अरु संशयको ठाउँ दिएको छ । स्वयं राणा पुनरावेदन अदालतकोन्यायाधीश हुँदा आफूभन्दा धेरै कनिष्टलाई मुख्य न्यायाधीश बनाएपछि दोस्रो वरीयतामा लामो समय बस्दा कति पीडा भएको थियो भन्नेसमेत भुलेको आरोप अहिले उनीमाथि लागेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका वरिपरि रहनेहरु हेटौँडाका कानुन व्यवसायी आशिष अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने भन्दै हिँडेका छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि वकिललाई सोझै मुख्य न्यायाधीश बनाइएको छैन । बाहिरबाट भएको नियुक्तिमध्ये सोझै मुख्य न्यायाधीश खाने नहकुल सुवेदी अपवाद पात्र हुन्, जसलाई तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वले एकै वर्षमा तीनवटा बढुवा दिलाएर त्यो ठाउँसम्म पुर्याएको थियो।
अहिले आशिष अधिकारीलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने हो भने अब मुख्य न्यायाधीश भन्ने पद नै प्रधानन्यायाधीशका नातेदार वा विशेष सम्बन्ध हुनेहरुका लागि आरक्षित पदका रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । मुख्य न्यायाधीशका लागि न्यायालयभित्रै एक से एक क्षमतावान करिअर जजहरु छन् ।
'उनीहरुलाई पाखा लगाएर कुनै विशेष नाता वा विगतको गुनका आधारमा न्यायिक नेतृत्वले बाहिरबाट ल्याएर राख्ने हो भने आफ्नै सहकर्मीप्रति नेतृत्वले गरेको घोर पाप हुनेछ,' प्रधानन्यायाधीशका एक हितैषी न्यायाधीश भन्छन्, 'यसरी नियुक्ति दिने हो भने एकातिर न्यायाधीश नै अन्यायमा पर्नेछन्, वृत्तिविकासका दृष्टिले । अर्कोतिर आमनागरिक अन्यायमा पर्नेछन्, फैसलामै अन्याय भएर ।'
आशिष अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारीका छोरा हुन् । किशोरको फर्ममा हालका प्रधानन्यायाधीश राणाले वकालती अभ्यास गरेका थिए । त्यही गुन अहिले मुख्य न्यायाधीश बनाएर तिर्न खोजिएको हो भने यसलाई न्यायपालिकालाई नै ठूलो दुर्घटनाको डिलमा पुर्याउनेछ ।